Fitaterana: mangataka hizarana fanampiana ireo kaoperativa | NewsMada
Fitaterana: mangataka hizarana fanampiana ireo kaoperativa
Tokony hitadiavana vahaolana ary rariny raha jerena ny fanampiana mifanandrify aminy ny sehatra tsy miankina rehetra, ao anatin’izany ny fitaterana, raha mijery lavitra ny politika hamerenana ny toekarena ny fitondram-panjakana. Io ny nambaran’ny mpikambana maro ao amin’ny UCTU, vondron’ny kaoperativa mpitatitra eto an-dRenivohitra. Efa-bolana izao nikatso tanteraka ny asan’izy ireo, noho ny hamehana ara-pahasalamana. Tsy misy hoentina miainga intsony, ny mpamily na ny resevera sasany efa misy nindaosin’ny fahafatesana, satria mandaitra mora ny Covid-19 rehefa reraka ny vatana tsy ampy sakafo, hoy ireo mpikambana ao amin’ny UCTU sendra anay.
« Tsy mangataka ny hiverina hiasa izahay raha ohatra ka mampanahy ny fifindran’ny tsimokaretina fa mangataka kosa izahay hisitraka ny zonay ho an’ny mpitatitra rehetra manerana an’i Madagasikara, araka ny lalàna. Aleo ny kaoperativa hizara ny fanampiana, fa ny kaoperativa no mahalala ny olony, aleo ny fanjakana ho mpanara-maso », hoy Rakotonirina Jean Louis Emile, filoha lefitry ny UCTU.
Nomarihin’ny ao amin’ny UCTU fa efa misy nahazo fa na izany aza, tsy ampy. Ao kosa ireo mbola tsy nahazo fanampiana mihitsy, toy ireo miasa amin’ny zotra mampifandray amin’ny kaominina manodidina. Na hiverina hiasa aza ny mpitatitra, mbola olana ny fiatrehana izany, satria mifampiankina ny sehatra maro. Ohatra, ny fahamaroan’ny very asa, midika fahabangan’ny mpandeha, mihena ny fidiram-bola ho an’ny mpitatitra. Fatiantoka ho an’ny toekarena.